> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod in Computer
"Waxaan u baahan tahay oo kaliya si ay u gudbiyaan gabayadayda annagoo ka iPod in aan computer cusub. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii aan ku qaatay saacado akhriska qodobada la xiriira ee discussions.apple.com, waxba ma waxaan ka helay. Inta badan heesaha oo ku iPod waxaa lagu dooxay ka CD-yada. Yahay suroobi karaa waddo si aad u hesho songs, kuwaas oo ka soo baxay? Fadlan siiyo talooyin, mahad! "
Waxa ay u muuqataa in dad badan oo u baahan in ay ka iPod wareejiyo music in computer si dib loogu dhiso ay Lugood Music Library. Si kastaba ha ahaatee, si looga hortago in burcad-badeedda, Apple ma bixiyaan fursado wax in aad nuqulka music ka iPod ah in computer ah. Nasiib wanaag, users weli isku dayi kartaa workaround hoose si ka iPod wareejiyo music in computer.
Xalka 1. Transfer music ka iPod (iPod taabashada laga saaray) in computer gacanta
Xalka 2. Nuqul music ka iPod in computer la TunesGo Wondershare (fudud)
Xalka 1 oo keliya shaqeeya iPod classic, shaandheeyn lagu iPod, iyo nano iPod. Haddii aad qabto ah taabashada orodka iPod ee macruufka 5 iyo ka dib, fadlan isku day Solution 2.
# 1.Transfer Music ka iPod ah in PC Windows ah:
Burcad aad Lugood Library on your computer. Guji Edit> rabtid> Qalabka, iyo hubi "Ka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah".
Raadi si aad iPod ama "Computer" qaybta "My Computer". Waxay u muuqataa sida disk laga saari. Laga soo bilaabo halkan, waa in aad ku dhufo "Tools" ama "Abaabulaan" ku qoofalan> Folder ikhtiyaarka ama folder iyo fursadaha raadinta. Guji View iyo hubi ikhtiyaarka "Ha tusin files maqan, galalka, ama drives".
Guji si uu u furo iPod, disk ka saari karo. Raadi gal ah sida "iPod-Control" la odhan jiray oo la furo. Ka dibna waxaad ka heli kartaa folder music taas oo ka kooban in aad heeso oo dhan aad iPod ah. Copy gal ah in aad damisid.
# 2.Transfer Music ka iPod ah in Mac:
Burcad Lugood aad on your Mac. Guji Edit> rabtid> Qalabka, iyo hubi "Ka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah".
Aad iyo Mac isticmaali Spotlight si ay u baadhaan "Codsiyada". Fur galka Codsiyada, ogaato iyo furi folder-huraanka ah.
Nooca ama nuqul amarradayda, waayo,
la bixin kari qori com.app.finder AppleShowAllFiles DAACAD
Laba-guji icon iPod iyo furo folder iPod Control. Jiid folder music ka iPod in aad desktop.
Xalka 1 qaadataa waqti dheer si ka iPod ah wareejiyo music in computer ah. Haddii aad isku daydo TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) , kaliya 1 ama 2 click (s), aad nuqul doonaa heesaha oo dhan ka iPod si aad u computer Lugood Library ama drive deegaanka isla.
Ha hadalkayga qaado, waxaa ka? Download version maxkamad free of Wondershare TunesGo iyo raac tallaabooyinka hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Riix halkan si aad wax dheeraad ah oo ku saabsan daydo iPod taageeray bartaan.
Tallaabada 1. Daahfurka Wondershare TunesGo
Orod TunesGo Wondershare iyo xiriiriyaan iPod la computer dhex cable USB ah. Ka dibna waxaad arki kartaa in aad iPod waxaa soo bandhigay in uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Transfer music ka iPod in computer
In uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad riixi kartaa "Si Lugood" si toos ah nuqul heesaha oo dhan si aad u Lugood Music Library ama "si gal" Xagga iPod wareejiyo music si gal ah oo ku saabsan drive adag ee degaankaaga. Si aad u wareejin songs soo xulay aad iPod si aad u computer, guji Media oo heli Music. Hubi heeso loo baahan yahay oo guji "Dhoofinta".